डा. गोविन्द केसी रिहा, गोपाल पराजुलीमाथि छानबिन हुने – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
डा. गोविन्द केसी रिहा, गोपाल पराजुलीमाथि छानबिन हुने
२०७४, २६ पुष बुधबार २०:१४
काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका गोविन्द केसी सामान्य तारेखमा रिहा हुनु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले केसीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालत आफैंले दायर गरेको निवेदनको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, उपेन्द्र न्यौपानेलगायतले बहस गनुभएको थियो । केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण भण्डारी, सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, गोपाल सिवाकोटी, ओमप्रकाश अर्याललगायतले बहस गर्नुभयो ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले डाक्टर केसीलाई अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा रिहा गरेको हो । यस्तै अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि डाक्टर केसीले लगाएको आरोप सम्बन्धी मिसिल सम्बन्धित निकायबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि दुई वटा नागरिकता लिएको, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षण संस्थान आइओएमका डिन शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
यी आरोपका बारेमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाएर छानविन गर्न इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।